चौथो त्रैमासमा आरएमडीसी लघुवित्तको नाफा २८ करोडभन्दा बढी
साउन १८, काठमाडौं । आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म रू. २८ करोड ५१ लाख ४९ हजार खुद नाफा गरेको छ ।
कम्पनीले साउन १८ गते साउन १८ गते गत आवको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको हो । उक्त विवरण अनुसार अघिल्लो वर्ष सोहि अवधिमा कम्पनीले रू. ३२ करोड ९२ लाख १४ हजार खुद नाफा गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा कम्पनीको नाफामा कमि आएको हो ।
गत आवमा सञ्चालन नाफामा कमि आएसँगै कम्पनीको नाफामा समेत कमि आएको हो । अघिल्लो वर्ष रू. ४८ करोड २५ लाख २६ हजार सञ्चालन नाफा गरेको उक्त कम्पनीले गत वर्ष रू. ४५ करोड ५१ लाख १७ हजार मात्र सञ्चालन नाफा गरेको हो ।
देशमा जारी लकडाउनका कारण गत वर्षको चौथो त्रैमासमा खुद व्याज आम्दानी पनि कम भएको छ । अघिल्लो वर्ष रू. ४८ करोड ५९ लाख ४७ हजार खुद व्याज आम्दानी भएकोमा गत वर्ष रू. ४६ करोड २ लाख ७४ हजार मात्र भएको छ ।
कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा अनुपात भने शून्य रहेको छ । गत चौथो त्रैमासमा उक्त कम्पनीले रू. ४ लाख ८६ हजार खराब कर्जा उठाएको छ । यो वर्ष सम्भावित जोखिम शिर्षकमा कुनै पनि रकम छुट्याएको छैन ।
विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रू. ७ अर्ब ६ करोड ६९ लाख ३४ हजार कर्जा सापट लिएको उक्त कम्पनीले रू. ८ अर्ब ६ करोड ८३ लाख ४० हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ । हाल रू. ८९ करोड ९३ लाख २३ हजार चुक्तापूँजी रहेको उक्त कम्पनीको जगेडा कोषमा रू. १ अर्ब ६९ करोड ९९ लाख ६१ हजार रहेको छ ।
गत आवको चौथो त्रैमाससम्म कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ३१ दशमलव ७१ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २८९ दशमलव शून्य ३ रहेको छ । यस अवधिसम्म कम्पनीले १४ दशमलव ८९ प्रतिशत तरलता व्यवस्थापन गरेको छ ।